प्राइम बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप, अब कहिलेसम्म ? - Arthasansar
प्राइम बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप, अब कहिलेसम्म ?
मंगलबार, २२ चैत्र २०७८, ११ : ३० मा प्रकाशित
प्राइम बैंक लिमिटेडले चैत्र १६ गते, बुधबारबाट निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थपिएकाे छ । अब उक्त ऋणपत्रमा चैत्र ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस्तै, यसै अवधिमा ऋणपत्रमा मागभन्दा धेरै आवेदन परेमा जुनसुकै दिन पनि सूचना निकालेर जानकारी दिन सकिने पनि बैंककाे सूचना उल्लेख छ ।
बैंकले प्रतिकित्ता १००० रूपैयाँ अंकित दरमा २ अर्ब ५० करोड बराबरको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेकाे हो । कुल २५ लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये बैंकले व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न संघ संस्थालाई १५ लाख कित्ता र सर्वसाधारणका लागि १० लाख कित्ता बिक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएकोमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि छुट्याईएको छ ।
बैंकले ‘१० प्रतिशत प्राइम डिबेञ्चर २०८८’ नाममा ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो ।
को हो बिक्री प्रबन्धक ?
बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम आरबीबी मर्चेन्ट बैकिङ्ग लिमिटेडले गरेकाे छ ।
लगानीकर्ताले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ५ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा चैत्र २१ गते र ढिलोमा चैत्र ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताहरूले आरबीबी मर्चेन्ट बैकिङ्ग, प्राईम कमर्सियल बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू तथा मेरो सेयर मार्फत अनलाईनबाट समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।